FAMPIASANA JOINTS, mpamatsy - mpanamboatra JOINTS China
Endri-javatra famolavolana ny vokatra Ny akora lehibe amin'ny vokatra dia vita amin'ny akora avo lenta, hamafin'ny avo, mora ampiasaina, ary apetraka haingana. Manana fanoherana tsara harafesina, fanoherana solika, fanoherana asidra ary alkaly. Ara-dalàna ny famolavolana ny firafitry ny vokatra. Tsy ilaina ny welding. Mora ny mamoaka sy mampidina entana, afaka manonitra ny famindrana, ny tsy fanitsiana ary ny fanondrahana ny fantsona ao anaty faritra iray. Ny fitsipiky ny asany dia aorian'ny bei ...
Mpifanaraka amin'ny fingotra azo ovaina
Toetoetran'ny fampisehoana Firaisana vita amin'ny fingotra azo ovaina, izay antsoina koa hoe mpitroka hovitrovitra, mpitraka fihozongozona fantsom-pitoviana, mpiray malefaka sy fantsom-pifandraisana sns, toy izany koa ny fantsom-pifanentanana miaraka amin'ny hafanana avo, ny fihenan'ny rivotra avo ary ny fanoherana antonony ary ny fanoherana ny toetr'andro. Ny mampiavaka azy dia: 1. Kely habe izy, maivana ny lanjany, tsara malefaka, mety amin'ny fametrahana sy fikojakojana. 2. Mandritra ny fametrahana, ny fifindran-toerana, ny famindrana ny axial ary ny angular dia ...